“Waxaan aad ugu dhowaaday inaan ku biiro Kooxda Chelsea” – Roberto Carlos – Gool FM
“Waxaan aad ugu dhowaaday inaan ku biiro Kooxda Chelsea” – Roberto Carlos
(London) 20 Maajo 2020. Halyeyga reer Brazil ee Roberto Carlos ayaa daboolka ka qaaday inuu aad ugu dhowaaday inuu ku biiro Kooxda kubadda cagta Chelsea sanadkii 2007.
Roberto Carlos ayaa intaas ku daray in heshiiskaas uu ugu wareegi lahaa The Blues uu burburay daqiiqaddii ugu dambeysay.
Daafacii hore ee reer Brazil ayaa ahaa beeca xorta ah waqtigaas, isagoo qeyb ka ahaa Real Madrid kaddib 11 sano oo uu koobab ku qaaday garoonka Santiago Bernabeu.
“Waxaan heystay labo qorshe oo kala ahaa Fenerbahce iyo Chelsea,” ayuu Carlos u sheegay shabakadda Goal.com kaddib tartankii Heineken Legends, waxaana uu hadalkiisa intaa ku daray: “Chelsea ma aysan shaqeynin, sidaasi darteed waxaan u saxiixay Fenerbahce.”
“Laakiin, Chelsea aad ayaan ugu dhowaaday, waxaa macno ahaan la isku raacay waa inaan halkaas u aado oo aan saxiixo heshiiska.
“Waxay ahayd isbuuc ka hor intaanan u saxiixin Fenerbahce, waxaanan joogay Paris si aan ula kulmo labadaba Roman Abramovich iyo Madixii fulinta ee Peter Kenyon.”
“Nasiib darrose, daqiiqadihii ugu dambeeyay waxyaabaha qaar ma shaqeynin wax yar uun ka hor inta aan la dhameystirin heshiiska, taasoo inta badan ka dhacda kubada cagta, waxaa jirtay arrin la xiriirta qareenka.”
“Waa la wada ogolaaday, inkastoo, anigu aan 100% hubo inaan shaqo fiican ka qaban lahaa Premier League, waana mid ku habboonaan lahaa dabeecadayda.” ayuu hadalkiisa ku daray Carlos.
“Ronaldo wuxuu sababay inta badan dhibaatooyinkeyga Real Madrid” – Fabio Capello